EbeIt: Ngwa nyocha ihuenyo dị egwu, ọnụahịa nlelị | Martech Zone
Wednesday, February 26, 2014 Satọde, 13 Juun 2015 Douglas Karr
Anyị na-achọ inweta foto mara mma nke email anyị na iPhone na ọnọdụ mara mma. Mgbe m mere gafee EbeIt, Enwere m obi ụtọ. Ngwa weebụ nwere ọtụtụ ihe oyiyi dị iche iche a na-edozi ngwa ngwa, ọ bụkwa naanị ole na ole iji bulite nseta ihuenyo gị ma gbanwee ya. Ngwa ahụ na-ewepụta ya site na ebe ahụ wee dozie akụkụ na ọkụ iji tinye nseta ihuenyo ahụ na-enweghị nsogbu na foto ahụ.
Ọ dị mma nke ọma ruo mgbe m pịrị download ịzụta oyiyi ahụ. The ikikere-akwụ ụgwọ bụ mkpari… ihu ọma na-achọ ka m na-azụta otu, elu-mkpebi oyiyi maka $ 85 ebe ọ bụla nnukwu saịtị - akọwapụtara ihe karịrị ndị ọbịa 1,000 otu ọnwa - chọrọ ikike ikike azụmaahịa ha agbatịkwuru. Nnọọ… otu puku echiche kwa ọnwa bụ nnukwu saịtị? Pị na atụmatụ nke ọnwa ọ bụla na-enye naanị ikikere azụmaahịa (naanị ndị ọbịa 1,000 kwa ọnwa).
N'ikwu eziokwu, ọ ga-akara m mma ijiri onye na-ese foto ọkachamara ma nwee oge ịse foto maka narị narị ego ole na ole ebe m nwere ike nweta obere foto iri na abụọ bụ nke m ma nwee ike iji ya mee ihe n'oge ọ bụla. Ruo oge ahụ, ebudatara m otu onyonyo n'aka onye nkwado anyị, Depositphotos… Ma gbakwunye nseta ihuenyo anyị na ya maka n'okpuru $ 5 na ojiji enweghị njedebe!
Tags: foto iphonedobenseta ihuenyo ngwafoto mbadambanseta ihuenyo
CEO nke ebe a… Maka ndị na-ede blọgụ - ịnwere ike iji ikikere n'efu na-enweghị oke oke ma ọlị. Not na-adịghị na-ele anya na ikike ikike gị iji ikpe.
Daalụ @navidash: disqus. Anaghị m ekwu maka iji ndị na-ede blọgụ, ana m ekwu maka iji azụmahịa. Ma dị ọnụ ala karịa ka m nwee foto dum na ọkachamara foto.
Daalụ maka nzaghachi. Naanị ka o doo anya: Ọ bụ mmetụta 1000 kwa ọnwa, ruo mgbe ebighị ebi.
Ndewonu! Nwere ike ịnwale http://www.picapp.net. Ọ dị ọsọ ọsọ & dị ọnụ ala karịa ma ị nwere ike ịmepụta ụyọkọ nseta ihuenyo ngwaahịa dị jụụ. Cheers!